hninthazin's Likes - Myanmar Network
Back to hninthazin's Page
အမျက်ဒေါသဖြင့် စာမရေးသင့်ကြောင်း (Never Writ… ကရာတေး ကျွမ်းကျင်သူတွေက “ကရာတေးနိ ဆန်း တေ နရှိ” “ကရာတေးမှာ ကိုယ်ကစပြီး တိုက်တယ်ဆိုတာ မရှိဘူး” ဆိုတဲ့ ဂျပန်ဆိုရိုးစကားကို ကျင့်သုံးကြတယ်။ အမျက်ဒေါသနဲ့ မတိုက်ရပါဘူးတဲ့။ ဒါကြောင့် kata လို့ခေါ်တဲ့ သတ်မှတ… Discussion အမျက်ဒေါသဖြင့် စာမရေးသင့်ကြောင်း (Never Writ… 47 Likes
ရုံးတွင်းအင်္ဂလိပ်စကား (၅) Complaining about another co-worker toaco-worker (လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အကြောင်း မကျေမနပ်ပြောခြင်း) ရုံးတစ်ရုံးဟာလူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်လို့ လူမှုပြဿနာလေးများ အကြိတ်အခဲလေးများရှိ တတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့လုပ… Discussion ရုံးတွင်းအင်္ဂလိပ်စကား (၅) 24 Likes
For Your Health!!! ကျန်းမာရေးရာသိမှတ်ဖွယ်ရာ * (တွဲဖက်၍မစားသင့်သော အရာများ)* ၁။ ငရုတ်သီး နှင့်တရုတ်ကြီး ၂။ သကြားခဲ နှင့်ရထားတွဲ ၃။ ခွေးရိုး နှင့်သေးအိုး ၄။တင်းတောင်း နှင့်ထင်းချောင်း ၅။ လက်ဖက် နှင့်တဘက်… Discussion For Your Health!!!5Likes
IMG_20130911_095104-1 photo IMG_20130911_095104-1 1 Like SANY0278 photo SANY0278 1 Like SANY0278 photo SANY0278 1 Like SANY0278 photo SANY0278 1 Like SANY0278 photo SANY0278 1 Like SANY0278 photo SANY0278 1 Like 20130907_140848 photo 20130907_140848 1 Like 20130912_165034 photo 20130912_165034 1 Like My promotion. photo My promotion. 11 Likes Vocation photo Vocation7Likes universal studio photo universal studio 12 Likes DSCF2030 photo DSCF2030 19 Likes
London School of Commerce ၏ ပညာရေး ဟောပြောပွဲ ဗြိတိသျှကောင်စီ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် London School of Commerce ၏ Admissions Officer ဒေါ်သီရိမေမှ မြန်မာကျောင်းသားများအတွက် LSC မှပေးနိုင်သော ပညာရေးအခွင့်အလမ်းများနှင့် တက်ရောက်နိုင်သော ဘာသာရပ်များ၊ ကျောင်းဝင… Discussion London School of Commerce ၏ ပညာရေး ဟောပြောပွဲ9Likes ဗြိတိသျှကောင်စီမှစီစဉ်သည့် ‘Empowering Highe… ဗြိတိသျှကောင်စီသည် ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် လျှောက်လှမ်းနေသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဆင့်မြင့်ပညာရေးကဏ္ဍမှ အဖွဲ့အစည်းများအား နိုင်ငံတကာနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပိုမိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်လျ… Discussion ဗြိတိသျှကောင်စီမှစီစဉ်သည့် ‘Empowering Highe… 10 Likes
အလင်းရောင်ဆာသော ပန်းကလေးများ ပန်းတွေပွင့်ဖို့ ရေနဲ့မြေဆီ အာဟာရလိုတယ်။ နေရောင်ခြည်ရဲ့ အလင်းရောင် ကောင်ကောင်းရဖို့လိုတယ်။ အလင်းရောင်ဖျော့နေရင် ပန်းတွေအစွမ်းကုန် လန်းခွင့်မရနိုင်ပါ။ အလင်းရောင်မှိန်တဲ့ လောကအလယ်မှာ ဘ၀အတွက် ရုန်းကန်… Discussion အလင်းရောင်ဆာသော ပန်းကလေးများ 35 Likes